Tamin'ny 20-22 Jiona Jizhong Group dia nanatrika VIV Europe 2018 tany Utrecht, Holandy. Miaraka amin'ny tanjona misy mpitsidika 25 000 sy orinasa fampirantiana 600, ny VIV Europe no hetsika ambony indrindra amin'ny indostrian'ny fahasalamana biby.
Tamin'izany fotoana izany, ny mpikambana ao amin'ny ekipa hafa dia nandray anjara tamin'ny CPhI China 2018 tany Shanghai, China. Ny fampitaovana fanafody mitongilana any Shina sy any Azia kokoa - faritra Pasifika.
Manome vahana anay ny fampahafantarana ireo vokatra ataontsika, ao anatin'izany ny fanafody varotra sy ny API eran'izao tontolo izao, ary nanana fotoana nahafinaritra izahay sy mpanjifa marobe sy vaovao. Miaraka amin'ny vokatra tsara kalitao sy ny serivisy matihanina, Jizhong Group amin'ny marika malaza dia eken'ny mpitsidika.